गुगल एनालिटिक्स | मल्टिपल लेखक ट्र्याक गर्नुहोस् Martech Zone
गुगल एनालाइटिक्सको साथ बहु लेखकहरू ट्र्याक गर्नुहोस्
बिहीबार, मार्च ० 12, २०२० आइतवार, अप्रिल २,, २०१। Douglas Karr
बहु लेखक साइटमा, प्रत्येक लेखकले कोटीहरूको समूहमा पोष्ट गर्न सक्दछ, साइटको समग्र रणनीतिमा प्रत्येक लेखकको योगदान पहिचान गर्न असम्भव छ। मैले भर्खर यससँग केही परीक्षण गरिरहेको थिएँ र प्रत्येक लेखकद्वारा ट्राफिक नाप्ने राम्रो सरल तरीका पहिचान गरे।
Google विश्लेषण अतिरिक्त ट्र्याक गर्ने क्षमता छ भर्चुअल पृष्ठहरु। यो सामान्यतया विज्ञापनमा आउटबाउन्ड लिंक ट्र्याक गर्न प्रयोग गरिन्छ वा अवतरण पृष्ठहरूमा कार्यको लागि कल। यद्यपि तपाईको एकल पोष्ट पृष्ठमा तपाईको गुगल एनालिटिक्स कोड चलाएर तपाई व्यक्तिगत लेखकहरूको लोकप्रियता ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
पृष्ठमा ठेठ GA कोड यस्तो देखिन्छ:
तपाईं निम्न थपेर 'भर्चुअल' पृष्ठदृश्य घुसाउन सक्नुहुन्छ:
var pageTracker = _gat._getTracker ("UA-XXXXXX-X"); pageTracker._initData (); pageTracker._trackPageview ("/ लेखक / लेखक द्वारा /Douglas Karr"); pageTracker._trackPageview ();
WordPress को लागी अनुकूलन गर्न:
var pageTracker = _gat._getTracker ("UA-XXXXXX-X"); pageTracker._initData (); pageTracker._trackPageview (? / लेखक / ?); pageTracker._trackPageview ();
अद्यतन: केही टिप्पणीकर्ताहरूले यो काम गरेनन् भनेर औंल्याए - मैले प्रसिद्ध थप्नु पर्ने भयो WordPress लूप भित्र!
यसले एकल पोस्ट पृष्ठमा आवश्यक पृष्ठदृश्य मात्र लोड गर्दछ। तपाई यसलाई विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ गृहपृष्ठको पहिलो पोष्ट निगरानी गर्न पनि, तर यो कम्तिमा एउटा सुरुवात हो। गुगल एनालिटिक्स भित्र तपाई खोल्न सक्नुहुन्छaसामग्री रिपोर्ट र यसलाई मात्र फिल्टर गर्नुहोस् "/ लेखक /" सबै लेखकहरूको सूची र त्यससँग सम्बन्धित पृष्ठ विचारहरू, बाउन्स दरहरू, पृष्ठमा समय, र रूपान्तरणहरूको सूची प्राप्त गर्न।
अब तपाइँ तपाइँका लेखकहरूलाई तपाइँको संगठनमा ल्याउने वास्तविक योगदानका लागि पुरस्कृत गर्न सक्नुहुनेछ! मलाई थाहा दिनुहोस् यदि तपाईं वर्डप्रेस प्रयोग गरेर मुद्दाहरूमा दगुर्नुभयो भने - मैले कोड लेखें र यसको परीक्षण गरेन।
टैग: Google विश्लेषणलेखक द्वारा पृष्ठ दृश्यपृष्ठ दृश्यपृष्ठ दृश्य
मार्स 13, 2009 मा 5: 29 एएम
ओह, राम्रो! मसँग अहिले सम्म मेरो ब्लगमा बहु लेखकहरू छैनन्, तर निश्चित रूपमा यो कहिले हुन्छ भनेर बुकमार्क गर्दछ। राम्रो सुझावहरू !!
मार्स 31, 2009 मा 4: 02 एएम
राम्रो छ तर मँ Google विश्लेषकमा लेखकद्वारा सामग्री रिपोर्ट कसरी सेटअप गर्ने। सहयोगको लागि धन्यबाद
अप्रिल 1, 2009 मा 9: 08 एएम
सब भन्दा सजिलो तरीका, माथिको विधि प्रयोग गरेर सामग्री रिपोर्ट खोल्न र "/ लेखक /" द्वारा फिल्टर गर्नु हो। त्यस बिन्दुमा तपाईले साप्ताहिक रूपमा रिपोर्ट ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल एनालिटिक्सले ईमेल गरिएका रिपोर्टहरूमा फिल्टरहरू बचत गर्ने राम्रो काम गर्दछ (म आशा गर्दछु कि उनीहरूले रिपोर्टलाई त्यस्तै तरिकाले बचत गर्न सक्दछन्!)।
अप्रिल 17, 2009 मा 12: 45 PM
मैले तपाईको कोड स्थापना गर्ने प्रयास गरें तर त्यसले मेरो लागि काम गरिरहेको छैन। मेरो WordPress WordPress Blog मा4लेखकहरू छन् र यहाँ कोड छ जुन मैले मेरो टेम्प्लेटमा ट्याग भन्दा पहिले टाँसें
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol)? "https: // ssl।": "http: // www।");
कागजात.वाइरिट (अनस्केप ("% 3Cscript src = '" + gAJsHost + "google-analytics.com/ga.js' प्रकार = 'पाठ / जाभास्क्रिप्ट'% 3E% 3C / स्क्रिप्ट% 3E"));
var pageTracker = _gat._getTracker ("UA-XXXXXX-X");
} क्याच (एरर)}
मैले यु आईडी-एक्सएक्सएक्सएक्सएक्स-एक्स लाई मेरो आईडीको साथ बदल्यो। कृपया मलाई भन्नुहोस् कि मेरो कोड ठीक छ वा गलत।
जब मैले स्रोतमा हेर्छु म केवल एक जना लेखक प्रदर्शित हुन्छु। र तपाईंको जानकारीको लागि म कुनै पनि WordPress प्लगइन प्रयोग गरिरहेको छैन।
कृपया सहयोग गर्नुहोस् ! मलाई यो नराम्ररी चाहिन्छ।
अप्रिल 21, 2009 मा 3: 06 PM
मलाई विश्वास छ कि ट्र्याकिंग विधिले मात्र काम गर्दछ यदि तपाईंको परमललिंक संरचनामा लेखक समावेश छ। मेरो छैन ताकि म कसरी एक विशिष्ट लेखक को लागी पृष्ठदृष्टि ट्र्याक गर्न सक्दछ जब मेरो url संरचना हो http://www.mysite.com/month/day/posttitle?
के _setVar प्रकार्य प्रयोग गर्न कोड परिमार्जन गर्न सकिन्छ?
मैले निम्न कोड प्रयास गरेको छु:
तर म निश्चित छु कि म बुझ्छु कि मैले त्यो समारोह कसरी संचालन गर्दछ वा यदि यसले कार्य गरिरहेको छ। म यसमा नयाँ हुँ।
अप्रिल 21, 2009 मा 11: 41 PM
म विश्वास गर्दछु म जान्दछु मुद्दा के हो, तपाईंले php लाई वर्डप्रेस लुपमा लपेट्नु पर्छ दुर्भाग्यवस, WordPress एक फरक पृष्ठ छैन कि यो एकल पृष्ठ हो कि हैन। म ब्लग पोष्टमा कोड अपडेट गर्न गइरहेको छु।
अप्रिल 21, 2009 मा 3: 16 PM
मेरो पूर्वावलोकन टिप्पणी थप्न ...
मैले भोग्ने समस्या भनेको यो हो कि लूप भित्र बोलाउनुपर्दछ तर सामान्यतया तपाईले GATC फूटर वा हेडरमा राख्नुहुन्छ, प्रत्येक टेम्प्लेट फाइलमा होइन जसमा एउटा लूप हुन्छ। विचारहरु?
अप्रिल 21, 2009 मा 11: 56 PM
म्याट - मलाई लाग्छ तपाईं र म एकै समयमा प्रतिक्रियामा भयो, यो लूप भित्र हुनुपर्छ। मैले कोड परिमार्जन गरेको छु र विश्वास गर्दछु कि लुप अझै शरीरको बाहिर र फुटरमा कार्य गर्दछ। सामान्य लूप भित्र भेरिएबल सेट गरेर यसलाई फुटरबाट कल गरेर सायद यसलाई सरलीकृत गर्न सकिन्छ।
केही टिप्पणीकर्ताहरू परीक्षण गरिसकेका छन् - हामी हेर्ने छौं कि यसले राम्रो काम गर्छ वा गर्दैन! मैले यो पृष्ठ ढिला भएको देख्न सक्छु, जे होस्।
अप्रिल 22, 2009 मा 3: 06 एएम
आशा छ यस पटक यसले कार्य गर्दछ ... नयाँ कोडको साथ मेरो बाटोमा ..
मई 13, 2009 मा 2: 23 एएम
अझै तपाईंको नयाँ कोडको लागि पर्खँदै ...। डगलस मलाई लाग्छ कि तपाईले होम पेज र एकल पोस्ट पृष्ठ दुबैका लागि आईफ ट्याग समावेश गर्नु पर्छ। आफैले यो प्रयास गरें तर काम गरेन ...
मई 23, 2009 मा 11: 24 एएम
GA उपयोगमा यो एक ठूलो अन्तरदृष्टि हो। म पक्कै यो मेरो ग्राहकहरु संग साझा गर्दछ। यो पोष्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद। हास्यास्पद हामी कसरी सजिलैसँग यो बिर्सन्छौं कि जाभास्क्रिप्ट हेरफेर गर्न सकिन्छ जब हामी पृष्ठहरूमा कोड थप्ने व्यस्त छौं!
TGP - साँच्चै महान पोस्ट!
जनवरी 16, 2010 मा 12: 39 एएम
मैले यो कोडलाई जुमलामा प्रयास गरेको छु।
स्ट्याटको २ दिन पछि ... म केवल मेरो अनुहारमा / अटोर / केही अधिकार देख्छु। म अब पृष्ठको वास्तविक uri देख्दिन।
जनवरी १, २०१ 29 १२::2010 अपराह्न
त्यसोभए यहाँ के फैसला छ? म यो कोडको साथ धेरै इच्छुक छु तर मसँग गल्तीहरूको लागि ठाउँ छैन। डगलस, शब्द के हो? म तपाईको सफलताको बारेमा अन्तिम अन्तिम पोष्ट पछि धेरै बकबक देख्दिन / छैन।
धन्यबाद र महान विचार!
सत्य यो हो कि यो of०% समाधान हो, रस! तपाईंले लेखकलाई लुपमा निर्दिष्ट गर्नुपर्नेछ… यदि तपाईंले गर्नुभयो भने, त्यसो गरेमा यो लेखकको जानकारी Google लाई सही तरीकाले पास हुनेछ। यद्यपि Google ले यसको डाटा क्याप्चर परिवर्तन गरेको छ र अब एक भन्दा बढी भ्यारीएबललाई अनुमति दिन्छ ... त्यसैले म यो विधि पूर्ण रूपमा त्याग्ने छु। म एउटा अनुगमन लेख्न प्रयास गर्ने छु!
फेब्रुअरी १,, २०११ 4:१:2010 अपराह्न
म GA प्रयोग गरेर WordPress मा लेखक-विशेष सामग्री ट्र्याक गर्न एक समाधानको लागि पनि खोज्दैछु। मलाई यो कोडको अपडेट गरिएको संस्करण हेर्न मनपर्दछ किनकि मलाई यसको मेरो बहु-लेखक ब्लगको लागि आवश्यक पर्दछ। के तपाईं एउटा अनुगमन लेख्न सक्षम हुनुहुनेछ? म यसको बारेमा लेख्नेछु र तपाईंलाई केहि प्रोप्स दिन्छु। Usual सामान्य रूपमा अद्भुत अन्तर्दृष्टिहरूको लागि धन्यवाद।
फेब्रुअरी १,, २०११ 26:१:2010 अपराह्न
द्रुत जवाफ डगका लागि धन्यबाद, म तपाईंसँग एक क्षण भए पछि अपडेटहरू हेर्नको लागि उत्सुक छु। एक महान पोस्ट र महान अनुगमनमा चीयर्स!